Mmetụta nke Nyocha Online | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya anyị malitere ịrụ ọrụ na ndepụta Angie ma ọ bụrụla onye megheere anyị ọnụ ahịa ole azụmaahịa na-eduga site na nke ha ntụle, nyocha na azụmahịa. Maka azụmaahịa mpaghara na-enye ndị ahịa ha nnukwu ọrụ, nyocha akwụ ụgwọ na ndepụta Angie bụ ezigbo ego.
Dabere na nyocha ahia ahia ahia nke American Express OPEN, US obere azụmaahịa ka nwere ike ịtụkwasị obi n'okwu ọnụ dịka ụzọ kachasị elu maka ndị na-azụ ahịa ịchọta ha. Otú ọ dị, Intanet dị nso n'azụ ya. Ndị ahịa mpaghara ugbu a na-adabere na ike njin ọchụchọ mgbe ha na-azụ ahịa na mpaghara ha. Anyị lelee ihe nke a pụtara maka obere azụmaahịa gị.
Milo, ihe nchọta ngwaahịa n'ịntanetị, etinyela ihe omuma ihe omuma a na-agwa ike nke ntule ntaneti.
Tags: Ndepụta Angieazụmahịa obodomiloNyocha banyere ntanetịNyocha